Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax oo la dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax oo la dilay
December 4, 2017 Puntland Mirror World 0
Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax. [Sawirka: Reuters]
Sanca-(Puntland Mirror) Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in la dilay madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax.
Warbaahinta ay maamulaan falaagada Xuutiyiinta oo soo xiganaya saraakiil ayaa sheegay in la dilay Cali.
Sawiro iyo muuqaalo wareegaya online-ka ayaa muujinaya jir u ek Saalax kaasoo madaxa uu ka soo gaaray dhaawac.
Tan iyo asbuucii lasoo dhaafay, Saalax taageerayaashiisa oo ay weheliyaan Xuutiyiinta ayaa dagaal kula jiray madaxweynaha hadda talada haya Cabdirabi Mansuur Haadi.
Sabtidii, Saalax ayaa ku baaqay in bog cusub la furo, uuna taageerayo madaxweyne Hadi haddii uu joojiyo weerarka Yemen uuna soo afjaro xanibaada daran.
Xulufada iyo dowladda Haadi ayaa soo dhaweeyay hadalka Saalax. Base Xuutiyiinta ayaa ku eedeeyay Saalax in uu wado afgembi.
In ka badan 8,670 qof ayaa ku geeriyootay 49,960 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tan iyo markii xulufada ay soo farogeliyeen Yemen bishii Maarso ee sanadkii 2015, sida ay sheegeen Qaramada Midoobay.
August 16, 2016 Maraykanka oo sheegay in maxaabiis ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay loo wareejiyay dalka Isutaga Imaaraatka Carabta
March 23, 2018 Ciidamada ammaanka Faransiiska oo toogtay nin hubeysan oo saddex qof dilay